संविधानवादबाट नचुकोस् कांग्रेस
भनिन्छ, संसद विपक्षीको हो । सत्तापक्षबाट भएका गलत क्रियाकलापको आलोचना र सवल कामको समर्थन गर्ने एकमात्र शक्ति विपक्षी भएकै कारणले यसो भनिएको होला । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा शक्तिशाली सरकार र सशक्त विपक्षी दलको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । बिगतमा जस्तो दुई\_तीन दर्जन दलहरु संसदमा रहने अवस्था नयाँ संविधान जारी भएपछि अन्त्य भएको छ । यो अवस्था संसदीय व्यवस्थाका लागि सुखद् हो ।
संविधानले शक्तिशाली सरकार ससक्त प्रतिपक्षीको परिकल्पना गरेपनि पछिल्लो समय संसदमा विपक्षी आवाज असाध्यै मधुरो सुनिएको पाइन्छ । आवाज वीहिनहरुको आवाज बोल्नुपर्ने मुख्य विपक्षी दल संसद भित्र हराएजस्तो देखिन्छ । विपक्षी आवाज विहीन हुँदा सत्ता चरित्र विहीन हुने भएकोले पनि संसदमा विपक्षी आक्रामक हुनुपर्ने मान्यता राखिएको छ ।
तर संसदमा रहेको मुख्य विपक्षी दल के कति कारणले हो संसदमा ससक्त बन्न सकिरहेको छैन । आलोचकहरुले सुरुदेखि नै कांग्रेसले मुख्य विपक्षीको भुमिका निभाउन नसक्ने भन्ने खालका आरोप लगाउँदै आएका थिए । लामो समय सत्ताको बागडोर समालेको र विपक्षी वेन्चको खासै अनुभव नभएकाले पनि होला नेपाली कांग्रेस मुख्य विपक्षीका रुपमा ससक्त बन्न सकिरहेको छैन । यो अवस्था प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका लागि उपयुक्त अवश्य होइन ।
विप्लवको काँध चडाई
पछिल्लो समय संसदमा नेपाली कांग्रेस एजेन्डा विहीन जस्तै देखिएको छ । कुमार पौडेल‘इन्काउन्टर’ प्रकरणपछि कांग्रेसले संसदमा गरेको प्रस्तुती हेर्नेहरु कांग्रेसको एजेन्डा विहीनता देखेर लजाउनु लजाएका छन् ।
कहिले विप्लवको काँध त कहिले राजपाको काँध चढेर कांग्रेसले बुर्कुर्सी मार्दा प्रजातन्त्र विरोधीहरुले टाउको उठाउने प्रयत्न गर्न स्वाभिक थियो । कांग्रेसको यही एजेन्डा विहीनतामा टेकेर प्रजातन्त्र विरोधीहरुले व्यवस्था विरुद्धका नाटकहरु कतै कतै मञ्चन गर्न थालिसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले व्यवस्थालाई सत्तासँग साट्ने गरी कुनै काम गर्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । यसका बाबजुद कांग्रेसले कहिले नेपालगन्ज प्रकरण त कहिले कुमार पौडेल प्रकरणमा संसदमा असंसदीय राजनीति गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. ससांक कोइरालाले लामो समयदेखि संविधानको मुलभुत मान्यतामाथी प्रहार गरिरहनु भएको छ । धर्म निरपेक्षतता र संसदीय गणतन्त्रमा ल्याप्चे लगाएर संविधान जारी गर्ने राजनितीक दलको पदाधीकारीहरुको बोली कति व्यक्तिगत र संस्थागत हुन्छ ? यसको मापन के हो ? यसमा कांग्रेसले स्पष्ट पार्नुभन्दा बरु कांगेसभित्र धर्मको नाममा पार्टीको वैतरणी तर्ने तामझाम सुरु भएको छ ।
भारतमा भारतीय जनता पार्टीले धर्मको नाममा सत्ताको स्वाद लिएको अवस्थामा कहिल्यै कुनै धर्ममा खासै रुची नभएको कोइराला परिवारका सदस्य डा. ससांकको असमयको भाका कति प्रजातान्त्रिक हो । अब कांग्रेसले बोल्नै पर्ने बेला भएको छ ।
संविधान दिवस नजिकिदैं गर्दा कांग्रेसभित्र असंवैधानिक चरित्र हावी हुनु व्यवस्था र कांङ्ग्रेस दुवैका लागी हानिकारक हुने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको वास्तविक पहिचान जान्न पाउनु आम मानिसको नैर्सगिक अधिकार हो । अब कांग्रेसले धर्र्मनिरपेक्षता वा हिन्दु धर्म सापेक्षता के नीति लिने हो प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ ।